Driver(Red License) ( 350,000) Code-43719
The recruitment company is Paint Distribution company Located in Hlaing Thar Yar. - ဆယျတနျး အောငျ မွငျ ပွီး သူဖွဈရမညျ - ယာဥျမောငျးအတှအေ့ကွုံ (3)နှဈအထကျရှိရမညျ - 7တနျကားမောငျး နိုငျ သူ ဖွဈရမညျ
Posted 03/06/2022 Hlaingtharya , Yangon Salary: 300,000 - 499,999 Experience:3-5 Years
General Worker (1.8Lakhs ) Code-43709
The recruitment is Paint & Varnish( Manufacturing & Distribution) Company Located Hlaing Thar Yar Tsp. - လုပျငနျးတှငျရရှေညျလုပျကိုငျနိုငျသောသူဖွဈရမညျ။
Posted 16/05/2022 Hlaingtharya , Yangon Salary: 100,000 - 299,999 Experience:1-3 Years
Driver (Urgent) (Male) (200,000 ++OT) Co...
တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်တွင်ရှိသော ready-mixed Concrete Company တခုမှ ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - ကားမောင်းအတွေ့ကြုံ ၂ နှစ်အထက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
Posted 07/12/2018 South Okkalapa , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
Service Staff (120,000 MMK) Code-15046
သာကေတမြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။ - အသက် (၁၈) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။ - ရုပ်ရည်သင့်တင့်ရမည်။ - ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ မည်သည့်နေရာဒေသမဆို တာဝန်ထမ...
Posted 01/08/2017 Thaketa , Yangon Salary: 100,000 - 299,999 Experience:Nil
Driver (Black) (Male) (250,000 MMK) Code...
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ -ပညာအရည်အချင်းအလယ်တန်းရှိရမည်။ -အတွေ့အကြုံ ( ၁- ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရိုးသားကြိုးစားရမည်။ -အသောက်အစားကင်းရမည်...
Driver (Male) (220,000 ~ 250,000 MMK) Co...
ကျောက်တံတား မြို့နယ်တွင်ရှိသော Travels and Tour Company ကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။ - အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အသောက်အစားကင်းရမည်။ -လိုင်စင်အနက်ရှိသူဖြစ်ရမ...